မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင်လှည့်ကင်းများဆောင်ရွက် | Information Committee
နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်အချိန်ထိ မောင်တောမြို့နယ်၊ နယ်မြေ(၁)၊ အမှတ်(၅)နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ ဗန္ဓုလကင်းစခန်းမှ ဒုရဲမှူး မြင့်မောင် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်(၂၀)ဦး၊ စကားပြန် ၁ ဦးနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အမှတ်(၁၁) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း Bhalukhaiya ကင်းစခန်းမှ Naib Subedar Md. Mozammel ဦးစီး (၂၀)ဦး၊ စကားပြန်/လမ်းပြ ၃ ဦးတို့သည် မိမိတို့နိုင်ငံအသီးသီးအတွင်းရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးလမ်းအတိုင်း နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၄၈)မှ (၄၉)ထိ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ၍ မြေပြင်လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်အချိန်ထိ မောင်တော မြို့နယ်၊ နယ်မြေ(၃)၊ အမှတ်(၁)နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ တောင်ပြို(ယာ)နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် သိန်းထွန်းမြင့် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အမှတ်(၃၄) နယ်ခြားစောင့်တပ် Baishfari ကင်းစခန်းမှ Naib Subedar Md. Mahbubur Rahman ဦးစီးသည့် (၁၅)ဦး၊ လမ်းပြ ၁ ဦးသည် မိမိတို့နိုင်ငံ အသီးသီးအတွင်းရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး လမ်းအတိုင်း နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် (၃၆) မှ (၃၈)ထိ နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင် လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။